रेफरल स्प्यामको साथ सुन्दर फेड अप? - सिल्ल्टको मार्गदर्शकहरू पछ्याउनुहोस्
यो भन्न नसक्ने कुरा गलत हुनेछ कि गुगल एनालिटिक्स वेबसाइट मालिकको लागि अत्यन्त उपयोगी छ किनकी यसले तपाईको वेबसाइटमा के गरिरहेको छ र कुन प्रकारको ट्राफिक प्राप्त गर्दछ भन्ने बारे जानकारी र अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ। Google एनालिटिक्सले हिट, उछाल दर, चाहे ट्राफिक कार्बनिक वा अकार्बनिक हुन्छ, यसको साथसाथै तपाईको साइटको सबैभन्दा प्रसिद्ध र व्यापक रूपमा हेरिएको पृष्ठहरू को मूल्यांकन गर्दछ। यो धेरै दुर्भाग्यपूर्ण छ कि भर्खर स्प्याम स्प्यामले हालैका महिनाहरूमा Google Analyticsलाई हिट गरेको छ, जसको मतलब तपाईको रिपोर्टहरू गलत र कम सहयोगी हुनेछ। भर्खरै, स्प्यामिंग URL को एक ठूलो संख्या फेला पर्यो जुन ट्राफिक ड्राइभिङमा मानिसहरूको ध्यान आकर्षित गर्दछ।
यहाँ, जैक मिलर, सेल्टल्ट वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धकले कसरी Google Analytics सन्दर्भ स्प्यामबाट छुटकारा प्राप्त गर्ने बारेमा विवरणहरू दिएका छन्।
के तपाईँका रिपोर्टहरू प्रभावित छन्?
धेरै व्यक्तिहरूले कसरी प्रभाव पार्ने भनेर बुझ्न कसरी पत्ता लगाउँछन् भ्रमित हुन्छन्। तपाईंलाई ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने कुरा यो कुरा हो कि तपाइँ प्रति दिन कस्तो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ। यदि अपेक्षित भन्दा बढी हेराईहरू हेराइमा देख्नुहुन्छ, त्यसपछि यो एउटा स्प्याम हुन सक्छ जुन स्प्याम वा हैकहरूले तपाईंको साइटमा हिट गरेको छ। तपाईले तपाइँको वेबसाइटको विवरण जाँच गर्न Google Analytics मा लग इन गर्नु पर्छ।
रेफरल स्पैम कसरि रोकन को लागि?
यो सत्य हो कि Google Analytics ले सबै भन्दा राम्रो प्रयास गर्दछ कि वेबसाईट मालिकहरु र वेबमास्टर्स को अपेक्षाहरु लाई आउछ। अझै पनि, त्यहाँ सन्दर्भहरू छन् जुन सन्दर्भ स्प्याम द्वारा हिट गरिनेछ। यसलाई रोक्नको लागि, तपाईंले सम्बन्धित प्लगइनहरू र सफ्टवेयर स्थापना गर्नुपर्छ, जसले तपाईंलाई नकली ट्राफिकबाट मुक्त गर्न दिन्छ। यदि हैकरहरू तपाईंको प्रयोगकर्ता नामहरू र पासवर्डहरू बिच्छेद गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो तपाईको ढिलाइ विवरणहरू परिवर्तन गर्न समय निकै ढिलो हुनु अघि समय छ र तपाईले प्रायः तपाइँको जानकारी गुमाउनु भयो। प्राय: प्राय: ह्याकरहरू तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी चोरी गर्न विशेष ट्र्याकिङ आइडी र कोडहरू प्रयोग गर्छन्। तिनीहरूको आक्रमणलाई रोक्न, तपाईले ठूलो संख्यामा फिल्टरहरू सिर्जना गर्नुपर्दछ र सान्दर्भिक सफ्टवेयर स्थापना गर्नु पर्छ ताकि तपाईंको ट्र्याकिङ आईडी चोरी नगर्ने हो। कुनै पनि व्यक्तिको लागि Google Analytics स्प्याम हटाउन सम्भव छैन, तर तपाइँ आफ्नो विवरणहरू लुकाउन र इन्टरनेटमा सुरक्षित रहन केही फिल्टरहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको ऐतिहासिक डेटाबाट सन्दर्भ स्प्याम हटाउँदै
यो तपाईंको ऐतिहासिक डेटा बाट सन्दर्भ स्प्याम हटाउने समय हो। यस उद्देश्यका लागि, तपाईंले फरक पृष्ठहरूको लागि विभिन्न खण्डहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। अनि निस्सन्देह, तपाईंले हप्तामा एक पटक तपाईंको फाइलहरू जगेडा गर्न बिर्सनु हुँदैन। यो अनिवार्य छ कि हप्तामा दुई पटक तपाईको पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस् र बलियो पासवर्डहरू प्रयोग गर्न सम्झनुहोस् ताकि ह्याकरहरूले उनीहरूको अनुमान लगाउन सक्दैन। पहिलो, तपाईं होस्टनाम म्याचहरू फिल्टर गर्न र अनमिन डोमेनहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। अर्को चरण सम्भव छ कि धेरै पृष्ठहरूमा फिल्टर थप्न।
ज्ञात बोटहरुलाई बहिष्कार गर्नुहोस्
ज्ञात बटहरू बाहिर हटाउन यो महत्वपूर्ण छ किनकि उनीहरूले तपाइँको साइटलाई मिनेटभित्रै संक्रमण गर्न सक्दछ। Google Analytics को बारे मा थाहा छ कि केहि बटहरू सजिलै फिल्टर गर्न र हटाउन सकिन्छ। यसका लागी तपाई प्रशासनिक खण्डमा जानुहोस् र सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुपर्छ। यदि तपाइँ यी सबै चरणहरू पछ्याउनुहुन्छ भने, तपाइँ आफ्नो वेबसाइटलाई Google Analytics सन्दर्भ स्प्यामबाट ठूलो हदसम्म सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ।
. Source - onlix site confiavel